Qeyla dhaan laga soo saaray maxaabiis ku xidhan xabsiyada Hargeysa iyo Mandheera =Warsaxaafadeed= | Salaan Media
Qeyla dhaan laga soo saaray maxaabiis ku xidhan xabsiyada Hargeysa iyo Mandheera =Warsaxaafadeed=
Xarunta Xuquuqal Insaanku waxay ogaatay afar qof oo xidhnaa mudo dheer iyaga oo sugayey in dacwad lagu soo oogo. Maxamed Nuur Xirsi, iyo Maxamed Cabdi Xasan waxa la xidhay 14/1/2010 halka Shucayb Ardaale Warsame la xidhay 7/12/2011, sidoo kale Cabdishakuur Abiib Diiriye waxa la xidhay 12/1/2012. Afartaas qof waxay xidhnaayeen inta u dhaxaysa sadex sano iyo lix bilood iyo sanad iyo lixbilood. Waxa laga soo kala qabtay Gebilay iyo Hargeisa.
Afartan qof waxa loo haystaa dhacdooyin ka dhacay degaanka u dhexeeya Gebilay iyo Boorama halkaas oo lagu laayay dad. Waxana lagu eedeeynayaa inay geysteen dil, budhcadnimo iyo kicin dadwayne.
Waa arin aad looga naxo in mudo ka badan sadex sano iyo badh qof xidhnaado isaga oo ka warsugaya in dacwad lagu soo oogo.
Sharcigu wuxuu ku xadiday inta u badan ee qof loo hayn karo garsugid 90 maalmood. Afartan qof waxay u xidhnaayeen sifo sharci darro ah in ka badan intii sharcigu jideeyay in la hayo.
Sida ku cad qodobka 27(9) waxa lagu mutaysan karaa ciqaab hadii la dhawri waayo hanaanka sharcigu u dejiyay u haynta qof garsuge ahaan. Xeerka Habka Ciqaabtu wuxuu waajibinayaa in mudada qof loo hayo garsuge ahaan ay waajib tahay in todobaad walba la horkeeno garsoore si uu uga go’aan gaadho hadii uu u baahdona u cusboonaysiiyo mudo todoba maalmood ah. Taas oo macneheedu yahay in aan qof la hayn karin wax ka badan todobo maalmood.
Waxa waajib ku ahayd dawladda inay ku soo oogto dacwadda ay u haysato oo horgeyso maxkamad, balse sharcigu uma ogolaanayo inay qof iska haystaan.
Sida ku cad qodobka 25 ee dastuurka qofna xoriyadiisa loogama qadi karo si aan xeerka waafaqsanayn. Qodokba 25 (3) wuxuu ku waajibinayaa dawladda inay damaanad qaado xuquuqda iyo xoriyaadka muwaadiniinta.
Sida uu dhigayo qodobka 26 ee dastuurka eedaysanuhu waa dembi laawe inta aanu maxkamad horteed kaga caddanin dembi. In qof la hayo mudo dhawr sano ah isaga oo garsuge ahi waxay ku gefay dembi-laawinimadiisa.
Waa werwer aad u wayn in xabsiyada Somaliland lagu hayo dad si ka soo horjeeda sharciga Somaliland.
Xarunta Xuquuqal Insaanku waxay u soo jeedinay masuuliyiinta Somaliland:
Inay si degedeg ah u sii dayaan dadkaas mudada dheer xidhnaa hadii ay dacwad u hayaanna aay sida ugu dhaqsaha badan ay ugu soo oogaan,
In baadhitaan lagu sameeyo waxa keenay in dadkaas mudo intaas leeg la hayo, ciddi masuuliyadeeda lahaydna talaabo laga qaado